‘सिक्रेट सुपरस्टार’ वसीमले किन छाडिन् वलिउड ? - नेपाल समय
‘सिक्रेट सुपरस्टार’ वसीमले किन छाडिन् वलिउड ?
काठमाडौं- वलिउड कलाकार जायरा वसीमले फिल्म इन्डस्ट्रिज छोड्ने घोषणा गरेकी छन्।
वलिउड स्टार आमिर खानका दंगल र सिक्रेट सुपरस्टार जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेर चर्चित भएकी कलाकार वसीमले फेसबुक स्ट्यास मार्फत आफूले अब फिल्म नखेल्ने घोषणा गरेकी हुन्।
फेसबुकमा उनले एक लामो स्ट्यटास लेख्दै आफ्नो धर्म र अल्लाहका लागि फिल्म छोड्ने बताएकी छन्।
उनले फिल्म छोड्ने घोषणा गरेपछि वलिउड कलाकारहरुले उनलाई नछोड्न आग्रह गरेका छन्। कतिपयले उनको फिल्म छोड्ने निर्णय एक साँघुरो सोचको उपज भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नायिका रवीना टण्डनले जायराको गलत सोच भएको बताएकी छन्।
त्यस्तै चर्चित बंगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीनले जायराको निर्णयले आफू आश्चर्यमा परेको बताएकी छन्। उनले ट्वीटरमा धर्मका कारण वलिउड छोड्ने निर्णयलाई बेवकुफी निर्णय भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
वलिउडका अरु कलाकार तथा शुभेच्छुकहरुले पनि जायराको निर्णयले आफूहरु आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
के थियो जायराको स्ट्याटस ?
पाँच साल पहिले मैले एक फैसला गरकी थिएँ, जसले सँधैका लागि मेरो जीवन बदलिदिएको थियो। मैँले वलिउडमा कदम राखेँ र यसबाट मैले अपार लोकप्रियताको ढोका खोलेँ। म जनताको ध्यानको केन्द्र बन्न लागेँ।
मेरो हैसियतअनुसार प्रस्तुत भएँ र धेरै युवाहरुका लागि रोल मोडल बन्न पुगेँ। तर मैले कहिल्यै पनि यस्तो गर्न चाहेकी थिईनँ।
खासगरी सफलता र असफलता मैले सोचेकी थिइनँ। यसबारे मैले खोज्न र सोच्न पनि सुरु गरेकी थिइनँ।
आज मैले वलिउडमा पाँच वर्ष पुरा गरेँ। अहिले मैले महशुस गरेकी छु, कि म मेरै कामबाट खुसी छैन। लामो यात्रापछि मैले साचेँ कि मैले अरु केही बन्नका लागि संघर्ष सुरु गरेकी थिएँ तर वलिउडमा
अब मैले ती जीजहरु खोज्न र बुझ्न सुरु गरेकी छु, जुन कुराका लागि मैले आफ्नो समय, कोशिष र भावना समर्पित गरेकी थिएँ। यो नयाँ जीवन शैलीको बारेमा बुझ्दै जाँदा मलाई पुरै किसिमले फिट छु भन्ने लागे पनि म यो कामका लागि बनेकी होइन भन्ने लागेको छ।
यो क्षेत्रबाट मलाई निकै प्रेम, सहयोग र प्रशंसा मिलेको छ तर मलाई विचलनको बाटो तर्फ लगिँदै छ कि भन्ने लागेको छ। म मौनता र अनजानमा आफ्नो इमानबाट बाहिर निस्केकी छु।
मैले यस्तो माहोलमा कामलाई निरन्तरता दिएँ जसले लगातार मेरो इमानमा हस्तक्षेप गरेको छ। मेरो धर्मसँग मेरा सम्बन्ध संकटमा परेको छ। मैले वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्दै गएँ र आफूले आफूलाई आश्वस्त पार्दै गएँ, मैले जे गरिरहेकी छु ठिक गरिरहेकी छु र यसले मलाई केही फरक पार्दैन भन्ने ठानेँ। मैले आफ्नो जीवनबाट सबै अस्तित्व गुमाईसकेँ।
मैले लगातार संघर्ष गरिरहेकी थिए कि म आफ्नो कर्म र इमान दुबै बचाई राखुँ तर म त्यस्तो गर्न असफल भएँ। एक पटक होइन कयौँ पटक।
आफ्नो निर्णयलाई दृढ बनाउन मैले जति प्रयास गरेँ तर असफल भएँ। मैले आफ्नो इमानको स्थिर तस्बिर बनाउछु भन्ने सोचँ तर म त्यसमा असफल भएँ। मैले जति पनि कामहरु गर्दा गर्दै अब गर्दिन भन्ने सोचेँ र कुनै दिन यी सबै कामहरु त्यागेर आफ्नो इमानमा फर्किन्छु भन्ने ठानेँ त्यो हुन सकेन।
जायराले आफ्नो निकै लामो स्ट्याटसमा कुरान र अल्लाहका कारण आफूले केही खुशी प्राप्त गरेको बताएकी छन्।
उनले अल्लाह र कुरानले आफ्नो जीवनमा पारेको ठूलो प्रभावबारे लेख्दै अब अल्लाह र कुरानकै नाममा वलिउड अभिनय छाडेको उनको तर्क छ।
विवादित गीत हटाएपछि दुर्गेश थापा रिहा
'वार'को कमाल, राख्यो यस्ता रेकर्ड
आकाश गुलाबी हुनसक्छ